१०.३२ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न एभरेष्ट बैंकको साधारण सभा पौष १ गते, बुक क्लोज कहिले ? « Artha Path
१०.३२ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न एभरेष्ट बैंकको साधारण सभा पौष १ गते, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । लाभांश पारित गर्नको लागि एभरेष्ट बैंकले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको मंसिर ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई घोषणा गरेको लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न पौष १ गते साधारण सभा बोलाएको हो ।
बैंकको २७ औं वार्षिक साधारण सभा पुस १ गते केन्द्रिय कार्यालय, लाजिम्पाटमा बिहान ११ः३० बजे बोलाएको हो । सभामा जुममार्फत पनि सहभागी हुने शेयरधनीहरुलाई मिटिङ्ग आइडि र पासवर्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकको सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ६ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि ४.३२ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल १०.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । त्यस्तै, बैंकको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पारित गर्नेछ ।
साधारण सभा प्रयोजनार्थ बैंकले मंसिर १७ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले मंसिर १६ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरुले बैंकको साधारण सभामा सहभागिता भाग लिन पाउनेछन् भने बैंकले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।